ဂယျရီနဗီးလျမေးပွီး ဆာဖာဂီဖွတေဲ့ ယူနိုကျတကျနညျးပွဘဝ အောငျမွငျမှုလြှို့ဝှကျခကျြမြားအငျတာဗြူး – Sports A2Z
ဂယျရီနဗီးလျအနနေဲ့ Skysports ရုပျသံအတှကျ ဆရာဟောငျးကွီးဖွဈတဲ့ ယူနိုကျတကျဂန်ထဝငျနညျးပွဟောငျး ဆာအဲလကျဈ ဖာဂူဆနျရဲ့ အောငျမွငျမှုလြှို့ဝှကျခကျြတှကေို မေးခှနျးထုတျခဲ့ရာမှာ ဖာဂီတယောကျ သူ့ရဲ့ဒဿနတှနေဲ့ ယူနိုကျတကျနညျးပွဘဝတလြှောကျ လကျကိုငျထားခဲ့တဲ့ ကိုယျပိုငျခံယူခကျြတှကေို ဝမြှေသှားခဲ့တာပါ။
ဘာကွောငျ့ အလုပျကွိုးစားခွငျးက ပါရမီတခုဖွဈရတာလဲ?
ဖာဂီအနနေဲ့ သူ့ရဲ့အသငျးတှငျး လှုံ့ဆျောရေးစကားတှကေို ပွောကွားလရှေိ့ရာမှာ သင်ျဘောကငျြးလုပျသားတှအေကွောငျး ဥပမာပေးပွောလရှေိ့တဲ့ အကွောငျးရငျးဟာ သတ်တုတှငျးနဲ့ မိုငျးလုပျသား၊ သင်ျဘောကငျြးက အလုပျသမားတှရေဲ့ အလုပျကွိုးစားပုံနဲ့ စိတျဓာတျမာကြောမှုကို ယူနိုကျတကျကစားသမားတှအေတှကျ အတုယူစလေိုခဲ့တာဖွဈကွောငျး သိရပွီး အလုပျကွိုးစားခွငျးဟာ ပါရမီတခုဖွဈကွောငျး မှေးမွူပေးခဲ့တာလို့ ဖာဂီက ဆိုပါတယျ။
” ငနျးပုံပွငျ ” လို အနှေးဓာတျလှုံဖို့ရာ
ဂယျရီရဲ့နောကျထပျမေးခှနျးဖွဈတဲ့ ” ငနျးပုံပွငျ ” အကွောငျးရှငျးပွရာမှာတော့ ဖာဂီက အနှေးဓာတျလေးလှုံခှငျ့ရဖို့ မိုငျ ၄၀၀၀ အကှာအဝေးအထိ ခရီးနှငျရတဲ့ ကနဒေါငနျးတှကေို ကိုယျစားပွုပွီး ယူနိုကျတကျအနနေဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို သိမျးပိုကျခငျြတယျဆိုရငျ ၃၈ ပှဲလုံးကို အနိုငျကစားရမယျဆိုတဲ့ ပုံခိုငျးနှိုငျးပွီး စိတျတကျကွှမှုကို ပေးခဲ့တာဖွဈကွောငျး သိရတာပါ။
” ကြှနျတျောက အိပျယာထဲရောကျနရေငျတောငျ ကိုယျ့ကစားသမားတှကေို ဘယျလိုစိတျဓာတျခှနျအားပေးရမလဲဆိုတာ အမွဲစဉျးစားနသေူပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၂၇ နှဈတာအတှငျး ယူနိုကျတကျကို ကိုငျတှယျလာခဲ့တော့ ဒီအသငျးအောငျမွငျမှုတှကေ ရှထေီးဆောငျးခဲ့ပွီးပွီ၊ ငါတို့လုပျပွီးသားတှပေါကှာလို့ ထုံထိုငျးသှားလို့ မရဘူးလေ၊ ”
“အောငျမွငျမှုကို နစေ့ဉျဆာလောငျနရေမယျ။ ကနြျောမနကျနိူးတိူငျး တှေးတဲ့အတှေးက ငါတို့ဟာ ဖလားတိုငျးကို အကုနျသိမျးမယျ၊ ပှဲတိုငျးအကုနျအနိငျကနျမယျဆိုတာပါ။ ဒါ့အပွငျ ဒီအောငျမွငျမှုတှဟော အသငျးက အောကျခွဝေနျထမျးတှအေထိ သူတို့ရဲ့အောငျမွငျမှုဖွဈတယျလို့ အမွဲအသိပေးလရှေိ့ပါတယျ”
ဂယျရီ နဗီးလျလောကျမကွိုးစားနိုငျရငျ ရျောနယျလျဒိုကိုပါ အမှုမထားတတျသူ
” အဓိကကတော့ ကိုယျ့ကစားသမားတှကေို ယုံကွညျမှုပေးရပါမယျ။ ကိုယျ့ယုံကွညျမှုအတိုငျး သူတို့က တကယျပွနျပေးဆပျပွီး ကစားကွပါလိမျ့မယျ။ ရျောနယျလျဒို၊ ရိုငျယနျဂဈ၊ ပေါလျစခိုးလျ၊ ကနျတိုနာ၊ ကာရဈ၊ ရှနျနီတို့ဆိုရငျ အရမျးပါရမီထူးတှေ ဘောလုံးသမားတှဖွေဈတယျ။
” ဒါပမေယျ့ ရှိငျကိနျး၊ စတိဗျ ဘရုဈ၊ ဖလကျခြာ၊ မငျး( ဂယျရီနဗီးလျ) တို့လို အားကွိုးမာနျတကျ အလုပျကွိုးစားနိုငျမှ ငါ့အသငျးမှာ သူတို့ကိုနရောပေးတယျ။ မငျးတို့ဟာ တကယျ့စိတျဓာတျမောငျးနှငျနိုငျစှမျးက မီးလိုတောကျနပွေီး အဲဒါက ရျောနယျလျဒိုလို စှမျးဆောငျရညျမြိုး ပေါကျကှဲထှကျလာတယျ။ ဒါမှ ငါ့အသငျးက ဟနျခကျြညီမှာကိုး။ ”
လီဗာပူးလျကို လေးစားရတယျလို့ ဘာကွောငျ့ဆိုလိုကျသလဲ?
” လီဗာပူးလျကို ရှုံးတိုငျး ဒေါသထှကျတယျဆိုတာ ငါက လီဗာပူးလျလိုအသငျးကို သိပျလေးစားလို့ပါ။ နညျးပွပေါကျစဘဝတုနျးက ဒီအသငျးရဲ့ လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးကို တပတျလောကျ ငါသှားလလေ့ာခဲ့ရတယျ။ အဲဒီမှာ သူတို့က ဘယျလောကျစိတျဓာတျပွငျးပွတဲ့အသငျးလဲဆိုတာ သိမွငျခဲ့တယျ။ ”
” ဒါကွောငျ့ ယူနိုကျတကျသာ အင်ျဂလနျမှာဘုရငျဖွဈခငျြရငျ လီဗာပူးလျလိုအသငျးကို ပှဲတိုငျးနိုငျရမယျ၊ ဖလားတိုငျးမှာ အလဲထိုးပွီး ကြျောဖွတျနိုငျရမယျ၊ ဒါမှ ငါတို့ခနျြပီယံဖွဈမယျ၊ ဒီစိတျဓာတျကို ငါ့အသငျးဆီ ရိုကျသှငျးခဲ့တယျ ” လို့ ဖာဂူဆနျက အနားယူပွီးခြိနျမှာ သူ့ရဲ့ဝါရငျ့အတှအေ့ကွုံတှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုစိတျနဲ့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
ဂယ်ရီနဗီးလ်အနေနဲ့ Skysports ရုပ်သံအတွက် ဆရာဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ ယူနိုက်တက်ဂန္ထဝင်နည်းပြဟောင်း ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်ရဲ့ အောင်မြင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်တွေကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ရာမှာ ဖာဂီတယောက် သူ့ရဲ့ဒဿနတွေနဲ့ ယူနိုက်တက်နည်းပြဘဝတလျှောက် လက်ကိုင်ထားခဲ့တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်တွေကို ဝေမျှသွားခဲ့တာပါ။
ဘာကြောင့် အလုပ်ကြိုးစားခြင်းက ပါရမီတခုဖြစ်ရတာလဲ?
ဖာဂီအနေနဲ့ သူ့ရဲ့အသင်းတွင်း လှုံ့ဆော်ရေးစကားတွေကို ပြောကြားလေ့ရှိရာမှာ သင်္ဘောကျင်းလုပ်သားတွေအကြောင်း ဥပမာပေးပြောလေ့ရှိတဲ့ အကြောင်းရင်းဟာ သတ္တုတွင်းနဲ့ မိုင်းလုပ်သား၊ သင်္ဘောကျင်းက အလုပ်သမားတွေရဲ့ အလုပ်ကြိုးစားပုံနဲ့ စိတ်ဓာတ်မာကျောမှုကို ယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေအတွက် အတုယူစေလိုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး အလုပ်ကြိုးစားခြင်းဟာ ပါရမီတခုဖြစ်ကြောင်း မွေးမြူပေးခဲ့တာလို့ ဖာဂီက ဆိုပါတယ်။
” ငန်းပုံပြင် ” လို အနွေးဓာတ်လှုံဖို့ရာ
ဂယ်ရီရဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းဖြစ်တဲ့ ” ငန်းပုံပြင် ” အကြောင်းရှင်းပြရာမှာတော့ ဖာဂီက အနွေးဓာတ်လေးလှုံခွင့်ရဖို့ မိုင် ၄၀၀၀ အကွာအဝေးအထိ ခရီးနှင်ရတဲ့ ကနေဒါငန်းတွေကို ကိုယ်စားပြုပြီး ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို သိမ်းပိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် ၃၈ ပွဲလုံးကို အနိုင်ကစားရမယ်ဆိုတဲ့ ပုံခိုင်းနှိုင်းပြီး စိတ်တက်ကြွမှုကို ပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သိရတာပါ။
” ကျွန်တော်က အိပ်ယာထဲရောက်နေရင်တောင် ကိုယ့်ကစားသမားတွေကို ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးရမလဲဆိုတာ အမြဲစဉ်းစားနေသူပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၂၇ နှစ်တာအတွင်း ယူနိုက်တက်ကို ကိုင်တွယ်လာခဲ့တော့ ဒီအသင်းအောင်မြင်မှုတွေက ရွှေထီးဆောင်းခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါတို့လုပ်ပြီးသားတွေပါကွာလို့ ထုံထိုင်းသွားလို့ မရဘူးလေ၊ ”
“အောင်မြင်မှုကို နေ့စဉ်ဆာလောင်နေရမယ်။ ကျနော်မနက်နိူးတိူင်း တွေးတဲ့အတွေးက ငါတို့ဟာ ဖလားတိုင်းကို အကုန်သိမ်းမယ်၊ ပွဲတိုင်းအကုန်အနိင်ကန်မယ်ဆိုတာပါ။ ဒါ့အပြင် ဒီအောင်မြင်မှုတွေဟာ အသင်းက အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေအထိ သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်လို့ အမြဲအသိပေးလေ့ရှိပါတယ်”
ဂယ်ရီ နဗီးလ်လောက်မကြိုးစားနိုင်ရင် ရော်နယ်လ်ဒိုကိုပါ အမှုမထားတတ်သူ
” အဓိကကတော့ ကိုယ့်ကစားသမားတွေကို ယုံကြည်မှုပေးရပါမယ်။ ကိုယ့်ယုံကြည်မှုအတိုင်း သူတို့က တကယ်ပြန်ပေးဆပ်ပြီး ကစားကြပါလိမ့်မယ်။ ရော်နယ်လ်ဒို၊ ရိုင်ယန်ဂစ်၊ ပေါလ်စခိုးလ်၊ ကန်တိုနာ၊ ကာရစ်၊ ရွန်နီတို့ဆိုရင် အရမ်းပါရမီထူးတွေ ဘောလုံးသမားတွေဖြစ်တယ်။
” ဒါပေမယ့် ရွိင်ကိန်း၊ စတိဗ် ဘရုစ်၊ ဖလက်ချာ၊ မင်း( ဂယ်ရီနဗီးလ်) တို့လို အားကြိုးမာန်တက် အလုပ်ကြိုးစားနိုင်မှ ငါ့အသင်းမှာ သူတို့ကိုနေရာပေးတယ်။ မင်းတို့ဟာ တကယ့်စိတ်ဓာတ်မောင်းနှင်နိုင်စွမ်းက မီးလိုတောက်နေပြီး အဲဒါက ရော်နယ်လ်ဒိုလို စွမ်းဆောင်ရည်မျိုး ပေါက်ကွဲထွက်လာတယ်။ ဒါမှ ငါ့အသင်းက ဟန်ချက်ညီမှာကိုး။ ”
လီဗာပူးလ်ကို လေးစားရတယ်လို့ ဘာကြောင့်ဆိုလိုက်သလဲ?
” လီဗာပူးလ်ကို ရှုံးတိုင်း ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာ ငါက လီဗာပူးလ်လိုအသင်းကို သိပ်လေးစားလို့ပါ။ နည်းပြပေါက်စဘဝတုန်းက ဒီအသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းကို တပတ်လောက် ငါသွားလေ့လာခဲ့ရတယ်။ အဲဒီမှာ သူတို့က ဘယ်လောက်စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြတဲ့အသင်းလဲဆိုတာ သိမြင်ခဲ့တယ်။ ”
” ဒါကြောင့် ယူနိုက်တက်သာ အင်္ဂလန်မှာဘုရင်ဖြစ်ချင်ရင် လီဗာပူးလ်လိုအသင်းကို ပွဲတိုင်းနိုင်ရမယ်၊ ဖလားတိုင်းမှာ အလဲထိုးပြီး ကျော်ဖြတ်နိုင်ရမယ်၊ ဒါမှ ငါတို့ချန်ပီယံဖြစ်မယ်၊ ဒီစိတ်ဓာတ်ကို ငါ့အသင်းဆီ ရိုက်သွင်းခဲ့တယ် ” လို့ ဖာဂူဆန်က အနားယူပြီးချိန်မှာ သူ့ရဲ့ဝါရင့်အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုစိတ်နဲ့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
19 May နံနကျခငျး နောကျဆုံးရ လီဗာပူးလျ သတငျးမြား စုစညျးမှု